War saxaafadeed ka soo baxay ururka Midnimada Xirfadleyda Soomaaliyeed
Wararkii: Aug 21, 2007
Max'ed Dheere "Dadka u qaxay inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye waa Argagixiso".
Ciidamo isku uruursanaya degmada Diinsoor ee gobalka Bay..
Ra'isul Wasaare Cali Geedi oo dib ugu shalay ugu soo laabtay Muqdisho
Dowladda Rwanda oo sheegtay in ay Soomaaliya u tababareyso ciidamo
Guuldaro kale oo soo wajahday xulka 17-jirada Soomaaliya
Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Max'ed Cumar Xabeeb (Max'ed Dheere) oo shalay ka hadlay xaflad lagu soo bandhigayey hub laga soo qabtay Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimo fara badan oo la xiriiray gobalka Banaadir, waxa uu sheegay in qalalaasaha iyo weerarada ka socda Magaalada Muqdisho ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan Odoyaal ay ka mid yihiin Max'ed Xasan Xaad iyo Axmed Diiriye, kuwaas oo madax ka ah Golaha Midnimada Beelaha Hawiye.
"Ciddii shidda dab iyada ayaa ku bixi doonta sidii ay horey ugu baxeen kuwa haatan ku sugan Magaalada Asmara" ayuu yiri Max'ed Dheere oo sheegay in dhaqdhaqaaqa ay wadaan odoyaashaasi ay la socdaa.
Max'ed Dheere waxaa kale oo uu sheeg ay in dadka u qaxay inta u dhexeysa Afgooye iyo Muqdisho ay yihiin dad argagixiso ah oo halkaasi ku quudiyaan Hay'adaha Caalamiga ah, hase yeeshee waxaa deegaanadaasi weli ku sii qulqulaya dad ka cararaya iska hor imaadyada ka socda Magaalada Muqdisho, iyagoo halkaasi ka raadinaya gobo ay gabaad ka dhigtaan.
Max'ed Dheere waxaa kale oo uu sheegay in warbaahinta Magaalada Muqdisho ay yihiin kuwo aan ka hadlin xaqiiqda dhabta ah, isago sheegay in ay buubuuniyaan wax aan loo baahneyn.
Max'ed Dheere waxa uu sheegay in warbaahinta ku sifoobeen kuwo qayb ka ah qalalaasaha ka taagan Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka waxa uu tacsi u diray qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen mas'uuliyiintii ka tirsanaa Idaacadda Horn Afrik, waxa uuna ku tilmaamay Idaacadda Horn Afrik mid si geesinimo ah uga hawlgasha dalka, waxa uuna ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta.
Maalintii shalay ahayd ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo iyo dilal loo gaystay dad rayid ah, iyo waliba ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka.
Qarax lala damacsanaa Guddoomiyaha Degmada Kaaraan ayaa waxaa la sheegay in uu ka badbaaday, waxa uuna sheeg ay guddoomiyuhu mar la wareystay in ay ku raad joogaan ciddii ka dambeysay qaraxaasi, sidoo kale qarax ka dhacay agagaarka Degmada Heliwaa a yaa lala beegsaday gaari ka tirsan Gawaarida Dowladda, hase yeeshee waxaa la sheeg ay in aysan wax khasaaro ah ka soo gaarin, balse rasaas ay ciidamo fureen ayaa waxaa ku dhaawacmay hal qof.
Dhanka kale labo qof oo rayid ah ayaa lagu dilay suuqa Bakaaraha, lama garananayo sababaha loo dilay dadkaasi.
Waxaa kale oo maalintii shalay ahayd isgoyska Black-sea lagu dilay askari ka tirsan ciidanka Booliiska, waxaana askarigaasi laga qaatay qorigii uu sitay, waxaana markiiba goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka, waxayna rasaas u fureen jiho kasta, waxaana mudo hal saac istaagay isku socodkii gaadiidka iyo dadka.
Waxaa shalay war-saxaafadeed soo saaray Ururka Midnimada Xirfadleysa Soomaaliyeed, waxa uuna war-saxafadeedkiisu quseeyey arrimaha dalka Soomaaliya ka taagan, waxa uuna u qornaa sidatan:
�Waqtigaan casriga ah, in caalamku taageero iyo qarash ku bixiyo dowlad ku dhisan qaab kala sareyn iyo takoor iyo cunsiriyad ama afar nin iyo naag iyo ku tiirsanaan ciidan shisheeye oo aan nabad iyo kalsooni dhalin Karin, xiligaan waxaa aad uga haboon dhisme dowlad milatari ah iyo dib u soo nooleynta ciidamadii qalabka siday ee Soomaaliya oo gacan bir ah ku qabta ammaanka dalka iyo dib u heshiisiin qaran oo miro dhal ah iyo in caalamku ka taakuleeyo dhinacyada dhaqaalaha, qalabeynta ciidamada iyo dib u dhiska iyo waliba dhiiragelinta wax soosaarka dalka, sidaa darteed iyadoo la tixgelinayo ammaanka dalka iyo dadka, sinaanta iyo xaquuqda bini�aadanimo, waxaan Dowladaha Xiriirka Soomaaliya (Contact Group) ka codsaneynaa in la maalgeliyo qaabkaan, qarashna aan lagu bixin qaab madhaliis ah oo aan soo kordhin karin wax aan dib aheyn�.
War-Saxafadeedkaan ayaa waxaa ku saxiixnaa Guddoomiyaha Ururka Midnimada Xirfadleyda Soomaaliyeed Ibraahim Geedi Jimcaale (Shookaali).
Wararka ka imaanaya degmada Diinsoor ee gobalka Bay waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ay halkaasi isku urursanayaan, waxaana la sheegay in ay wataan 20 tikniko ah, waxayna ka kala tageen Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo.
Ciidankaan ayaan la garaneyn sababaha halkaasi loogu uruurinayo, balse warar ayaa waxay sheegayaan in ciidankaasi ku wajahan yihiin Magaalada Kismaayo kaddib markii halkaasi ay dhawaan ku dirireen ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka, kuwaas oo u kala baxay aakhirkii qaab qabiil.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka waxa uu sheeg ay in arrinta kismaayo lagu dhameyn doono wada hadal iyo isafgarad, iyadoo dhawaan wafdi ka socda Magaalada Kismaayo ay la kulmeen madaxweyne C/llaahi Yuusuf oo ay isku afgarteen in arrintaasi lagu wajo wada hadal.
Ra'isul Wasaare Cali Max'ed Geedi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu dhowr todobaad ku maqnaa Magaalada Nairobi.
Ra'isul Wasaaraha ayaa sababaha ugu weyn ee uu u tagay magaalada Nairobi ahayd ka qaybgalka aroos wiil uu dhalay, sidoo kale Ra'isul Wasaaruhu waxa uu Magaalada Nayroobi kulan kula yeeshay madax ka tirsan Qarmada Midobey, Dowladaha Mareykanka iyo Midowga Yurub oo ay isla soo qaadeen xaaladda Soomaaliya.
Waxaa la filayaa in kulan saddex geesood ah ay magaalada Muqdisho ku yeeshaan Madaxeynaha Dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf, Ra'siul Wasaare Cali Max'ed Geedi iyo Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe, kaas oo looga hadli doono xaaladda ka taagan Magaalada Muqdisho oo maalmahan cirka isku shareertay kadib markii ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal joogto ah, kuwaas oo lala beegsanayo Madaxda Dowladda iyo waliba saldhigyada Ciidamada Dowladda iyo kuwa Itoobiya ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, waxayna sidoo kale weeraradaasi dhibaato ka soo gaartaa dadweynaha rayidka ah oo iyagu intoodii badnaa isaga cararay Magaalada.
Dowladda Rwanda ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay Soomaaliya u soo diri doonaan ciidamo tababar siiya ciidamada Dowladda Federaalka ah.
Afhayeen u hadlay Dowladda Rwanda ayaa sheegay in ciidamadaasi yihiin kuwo gacan ka gaysanaya sii kor loogu qaadi laha tayada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
"Ciidamadaasi ma ahan kuwo u socda dagaal, ee waa tababarayaal" ayuu yiri AFhayeen u hadlay Dowladda Rwanda.
Ciidamo fara badan oo lagu waday in loo soo diro Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon lahaa ciidamada AMISOM ayaa dib u dhacay kadib markii loo waayey dhaqaalihii ku bixi lahaa.
Dowladda Burundi ayaa waxay diyaarisay ilaa iyo 150 oo askari, hase yeeshee ciidamadaasi ayaa loo la' yahay qalabkii iyo dhaqaalihii kale ee lagu soo daad-gureyn lahaa, iyadoo Qaramada Midoobey u ololeyneyso sidii ciidamada Soomaaliya loo dirayo u noqon lahaayeen kuwo hoos taga Qaramada Midoobey.
Qaramada Midoobey ayaa ilaa ciidan gaaraya 1600 u soo dirtay Soomaaliya kuwaas oo ku sugan goobo ay ka mid yihiin Xarunta Madaxtoonyada, Garoonka Diyaaradaha iyo kuwo kale, mana sameeyaan wax dhaqaqaaq ah oo ku waadan dhinaca nabadda.
Xulka qaranka Soomaa-liya ee da'doodu ka hooseyso 17 jirada ayaa waxa uu mar kale kulan la yeeshay xulka wadanka Burundi oo martigelinaya tartanka Bariga iyo Bartamaha Afrika.
Cayaartaan oo ahayd mid aad u adkeed ayaa xulka qaranka Soomaaliya waxa uu soo bandhigay cayaar xirfadeedu sareysay balse waxa uu la kulmay guuldaro kadib markii looga badiyey 3-0.
Waa guuldaradii labaad ee uu xulka qaranka Soomaaliya la kulmo, waxaana horey uga soo badiyey xulka wadanka Ruwanda.
Maalinta arbacada ah ayaa cayaartoodii ugu dambeysay waxa ay la yeelan doonaan xulka wadanka Tanzania, inkastoo ay ka hareen tartanka haddana xulka waxaa la sheegay in uu muujiyey karti iyo dadaal dheeraad, maadaama inta uu tababarka sameynayey aysan ka badneyd mudo bil ah.